Sedax Xidigle Katirsan Ciidamada Minishiibiyada Oo Lagu Dilay Suuq Bacaad.
Wednesday October 04, 2017 - 12:38:40 in Wararka by Super Admin
Xoogag Bastoolado ku hubeysan ayaa maanta Barqadii sarkaal sare oo katirsan dowladda Hoose ku dilay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
sawir hore askari Muqdisho lagu dilay
Sida Dad Goob joogayaal ah ay xaqiijiyeen Sedax Xidigle katirsan ciidamada Minishiibiyada ayaa lagu dilay agagaarka Sarta Daboole oo ku dhow Bosteejada weyn ee Suuq Bacaad oo ah suuqa 2-aad ee ugu weyn magaalada Muqdisho.
Raggii weerarka fuliyay ayaa si nabad gelya ah goobta uga dhaqaaqay mana jirin cid dabagal ku sameysay, sarkaalka ladilay ayaa lacagaha Canshuurta loogu magac daray ka qaadi jiray ganacsatada meheradaha ganacsi ku leh Suuq Bacaad.
Xalay maqribkii ayaa xaafadda Siligga Americanka lagu dilay Gaashaanlle Sare Max’med Yare oo kamid ahaa saraakiisha sarsare ee melleteriga dowladda Federaalka,Al Shabaab ayaa sare u qaadday weerarada dilalka qorshaysan ah oo ay ku beegsanayso saraakiisha dowladda.
Wasiirka amniga DF-ka ayaa dilalka caasimadda ka socda ku macneeyay kuwa fashilinaya qorshihii xasilinta caasimadda ah oo sedax bilood ka hor uu ku dhawaaqay Xasan Cali Kheyre oo ku magacaaban R/wasaaraha DF-ka.